China nyowani yakakwidziridzwa mutsipa kutonhora system maindasitiri emhepo inotonhorera XK-25H fekitori uye vanotengesa | XIKOO
XK-25H nyowani yakakwidziridzwa mutsipa inotonhodza sisitimu yemhepo inotonhorera ndiyo nyowani maindasitiri emhepo inotonhorera yakagadziriswa neXIKOO. kune kumusoro, pasi, padivi mhepo kubuditsa kuti zvive nyore kuiswa pamadziro, padenga uye nedzimwe nzvimbo.Iyi modhi nyowani ine yakanyanya kutonhora pad, iri nani evaporative uye kutonhora mhedzisiro. Mhepo inotonhorera kukwirira inosvika ku1270mm. Izvo zvinoshanda kutonhodza 60-80m2 chirimwa munzvimbo ine hunyoro uye 100-150m2 chirimwa munzvimbo yakaoma.
XK-25H nyowani yakakwidziridzwa mutsipa unotonhodza system maindasitiri emhepo inotonhorera akashongedzerwa nemaindasitiri emhando yepamusoro, anosanganisira akazara Nyowani PP zvinhu zvemuviri, anti-UV, anti-kukwegura, yakareba makore gumi nemashanu ehupenyu. 100% yemhangura-waya mota, mvura chiratidzo chiyero Ip54. Nylon & girazi faibha uye simbi fan, yakapfuura ine simba chiyero bvunzo usati washandisa. Corrosion kuramba uye yakanyanya kushanda pombi yemvura, maawa 13000 anoramba achishanda anoshanda hupenyu nguva. 10cm ukobvu inotonhorera pad, inopfuura 80% evaporative rate.Glue yakavharwa mvura chiratidzo wedunhu bhodhi ine Kupfuura mutoro kudzivirirwa, pamusoro pemari kudzivirirwa, kudzivirira kushomeka kwemvura uye yakazara-otomatiki drainage basa. LCD inodzora pani ine gumi nemaviri akachimbidzika. Mvura yetangi yemvura inogona kubviswa neUV-mwenje mudziyo (sarudzo)
XK-25H / pasi
XK-25H / padivi
XK-25H / kumusoro
Kushanda : XK-25H nyowani yakakwidziridzwa mutsipa inotonhodza system maindasitiri emhepo inotonhorera ine kutonhora, humidification, kuchenesa, kuponesa simba kune mamwe mabasa, inonyanya kushandiswa kumusangano, purazi, imba yekuchengetera, greenhouse, chiteshi, musika nedzimwe nzvimbo.
Pashure: mbeveve maindasitiri centrifugal mvura evaporative mweya inotonhorera XK-20S
Zvadaro: hombe yemweya mafekitori emhepo inotonhorera kutonhora fan XK-30S
Mhepo Inotonhorera Machine
Mhepo Inotonhora Sisitimu
Zinga Mhepo Inotonhorera
nyowani dhizaini evaporative mweya inotonhorera
mbeveve maindasitiri centrifugal mvura evaporative a ...